Microsoft na-arịọ Google ka o were ahịa Ahịa Email | Martech Zone
Dị ka ọtụtụ n'ime gị, a manyere m ịrụ ọrụ na Microsoft Outlook na ụlọ ọrụ m. A na-amanye m ịhazi na zipu ozi ịntanetị na-eji HTML na onyonyo dị mfe iji hụ na ndị ahịa ụlọ ọrụ anyị nwere ike ịgụ ozi ịntanetị ndị ahụ. Na Outlook 2007, Microsoft hapụrụ ụkpụrụ weebụ maka HTML wee laghachi na akara 2000 ha - ijikwa email na Microsoft Word engine.
Outlook ekwuola ugbu a na ụdị 2010 ha ga-aga n'ihu na-eji injin ntụgharị Microsoft Word. Nanị echiche m nwere ike ịme mgbe afọ iri na-enweghị nkwalite nsụgharị bụ na Microsoft achọghịzi ịnwe Ahịa Email Corporate. Microsoft achọghị inyere azụmahịa gị aka n'iji ụdị ozi mmekọrịta, Flash, ma ọ bụ mwekota Silverlight na-enyefe ozi. Microsoft ga-achọ Google idu ahịa a.
Echere m Google na akwadebe iweghara Google Wave. Google Wave, ọ bụrụ na a tọhapụrụ ya dịka akpọsa, ga-emepe nkwukọrịta ụlọ ọrụ na mmekorita oge, ịkekọrịta, na usoro API siri ike maka ijikọ ahịa. Ekwenyesiri m ike na ọ ga-aza ụdị na Flash, kwa, ebe ọ bụ na ọ dabere na ihe nchọgharị.
Nke a nwere ike ịbụ onwu nke Outlook… na Exchange kwa. Ọ bụrụ na Google nwere ike ịkwalite email ma tinye atụmatụ ndị na-edozi nkwukọrịta ụlọ ọrụ, ahịa ga-eme. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ amalite ịgbapụta na Outlook, ọ dịghịkwa mkpa maka Microsoft Exchange, ma.
E nwere ọgba aghara na-arịwanye elu megide Microsoft na ọkwa ọhụụ a… sonyere ndị isi na Twitter! Ma ọ bụ emela… ikekwe ihe ka mma na-eche n'akụkụ!
Ruo afọ iri abụọ gara aga, mụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iji nweta teknụzụ iji melite ma wulite usoro nkwukọrịta ha n'ụzọ zuru oke. O juru m anya na Microsoft, ebe ọ bụ na ha nwere ahịa email ụlọ ọrụ, emeela obere ihe iji nyere aka mee ka ihe ọhụrụ banye na ahịa ahụ.
Email marketing kwesịrị webata ngwa ngwa dị ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere… na Microsoft kwesịrị ịbụ onye na-arị elu. Ọ bụrụ na ha agaghị, m n'aka na Google ga-.
Tags: email ụlọ ọrụdesktọọpụ ahịaemailemail htmlozi nsụgharịgoogle gmailelele microsoftele ihe anyaele ihe anyaele HTML anya
Amaghị m na ụlọ ọrụ 'nnukwu' ụlọ ọrụ ga-anabata mgbanwe email ha, na mmemme Google karịrị Microsoft. M na-ekwu nke ahụ, n'ihi na ee, ebe Microsoft nwere ọtụtụ email ụlọ ọrụ, a ka nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ Fortune 500 na-eji Lotus Notes… ozugbo 'ụlọ ọrụ' buru ibu mere ihe siri ike idozi ya.
Ezigbo ihe! Mgbe m rụrụ ọrụ na akwụkwọ akụkọ, anyị jiri Lotus Notes. Ihe kpatara ya, ọ bụ n'ihi na anyị nwere ike ịmepụta azịza arụ ọrụ dị mfe na Domino nke jikọtara nke ọma. Echere m na ikike akpaaka na njikọta bụ isi - ọ bụrụ na Google nwere ike ị nweta ikpo okwu na-echekwa ego, ụlọ ọrụ Fortune 500 ga-amalite ịkwaga.